Faritra Boeny: firariantsoa sy fiarahabana fotoana hanaovana tatitra | Région Boeny
Faritra Boeny: firariantsoa sy fiarahabana fotoana hanaovana tatitra
27 janvier 2017 A La Une, Actualité
Firariantsoa sy fiarahabana ny fahatratrarana ny asaramanitra 2017 no notanterahin’ny Lehiben’ny Faritra Boeny sy ny Préfet an’i Mahajanga miaraka ny Alarobia 25 janoary 2017 tao amin’ny Lapan’ny Faritra Boeny, Mahajanga be.
Fahavononana sy filofosana amin’ny fisandratana mirindra no andrasana amin-tsika olom-panjakana sivily sy miaramila amin’ity taom-baovao ity hoy ny Préfet Atoa Ravelomahay Lahiniaina Fitiavana, nanokatra ny lanonana. Izany dia mifanaraka amin’ny vina sy toro-marika nampitain’ny Filoham-pirenena. Koa milazà mialoha raha tsy haharaka na tsy hiaraka hanatratra ny fanamby ho an’ity taona ity, mba hahatsapan’ny vahoaka fa miasa arak’izay tokony hoy izy ny fanjakana, hoy ihany izy.
Ny fihaonana toy izao dia fotoana fanaovana tatitra amin’ny mpiara-miasa rehetra sy ny mpiara-miombon’antoka ary ny vahoakan’ny faritra ny zava-bita sy izay mbola ho tanterahina, hoy kosa ny Lehiben’ny faritra, Atoa Saïd Ahamad Jaffar.
Notanisainy teto ary ny fampandrosoana ny faritra Boeny mifanaraka tamin’ny paikadim-pirenena, izay notanterahin’ny Faritra niaraka tamin’ireo Sampandraharam-paritra sy mpiara-miombon’antoka isan-karazany misy eto an-toerana.
Sosialy: fiahina ny tanora sy ny ankizy ary ny fahasalamam-bahoaka
Anisany nisongadina tamin’ny ara-tsosialy ny fampiroboroboana ny fananan’asa izay nanangànana ny rafitra fanangonana antontam-baovao momban’ny asa eo anivon’ny Foibem-paritra misahana ny fampananan’asa ho an’ny tanora eto Boeny. Teo ihany koa fahavitan’ny ny drafitr’asa ho fiarovana ny ankizy na ny « Plan cadre d’action de protection de l’enfant ».
Tsy ny tsara ihany no nampahatsiahivina fa ireo tranga rehetra nisy teo amin’ny resaka fahasalamana ka nanaovan’ireo tompon’andraikitra ezaka miaraka. Anisan’izany ny nahitana trangan’ny lefakozatra miisa telo teto amin’ny faritra Boeny iny taona lasa iny, ny trangana haromotana vokatry ny kaikitr’alika, miisa 03 tamin’ny distrikan’i Mahajanga I sy Marovoay. Teo koa ny fitiliana ny tsimokaretina Sida ka nahafantarana fa miisa 178 ny isan’ny olona tratran’ny VIH sida eto Mahajanga ny taona 2016 ary efa hanaovana fanaraha-maso sy fitsaboana manokana.
Torak’izany koa ny fitiliana ny aretina raboka, miisa 947 no voatily sy notsaboina tamin’ireo toeram-pahasalamana 12 izay nanaovana izany nanerana ny faritra.
Farany dia ny fitiliana sy fitsaboana ny aretina tazomoka, ka tamin’ireo olona 700 000 nozahana dia 25 000 no voan’ny tazomoka izany hoe eo amin’ny 03% eo.
Toekarena: nisongadina ny fizahantany miompana amin’ny tontolo iainana
Natokan’ny Faritra ho taonan’ny fizahantany ny taona 2016, anisan’izany ny fampiroboroboana ny fizahantany ao amin’ireo valanjavaboahary sy Faritra arovana vaovao, toy ny ao Mahavavy-Kinkony Mitsinjo, sy Soalala.
Vita ihany koa ny Drafitrasam-paritra momba ny angovo biolojika, ny Drafi-paritra fanajarina ny tany ary ireo Drafitra Ifotony Fanajariana ny tany ho an’ireo Kaomina eto Boeny.
Tsy hadinon’ny Lehiben’ny Faritra teto ny nanasongadina ireo tetik’asan’ny Filoham-pirenena vita eto antampon-tanànan’i Mahajanga toy ny fandrakofana tara ireo làlana maromaro teny anivon’ny fokontany. Mikasika ny tontolo iainana manokana dia noresahiny ny fitsanganan’ny komitim-paritra mitantana ny faritra sisin-dranomasina eny amin’ny helidranon’i Bombetoka izay mbola mitahiry ala voajanahary.
Maromaro ny fanavaozana ny politika fitantanana ny ala sy ny lalàna mifehy izany ka anisany efa voarafitra ary nankatoavina ny paik’ady entina miady amin’ny fahapotehan’ny ala izay miompana amin’ilay tetik’asa RED+ na «Réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation forestière». Ankilan’izay dia nampitomboana ny velarantany novolena hazo, ka efa mihoatra lavitra ny tanjona izay napetraka izany.
Asa-tànana sy hetra:
Ankoatra ireo dia nampahafantarin’ny Lehiben’ny faritra ny fandraisana an-tànana sy fanomezan-danja sy fanomezana tosika ireo mandraharaha ny asa-tànana Malagasy. Ka ho an’ny faritra Boeny manokana dia miisa 45 ny isan’ny fanomezan-dàlana hanondrana ireo vokatra asa-tànana Malagasy nomena ny taona 2016, ary tafapetraka ny atao hoe tranoben’ny asa-tànana ao amin’ny distrikan’i Mahajanga I sy II.
Miakasika ny hetra, vokatry ny ezaka fampidirana ho amin’ny ara-dalàna ireo mpitrandraka harena ankibon’ny tany dia nahitana fiakarana 14% ny vola azo avy amin’io sehatra io raha oharina tamin’ny 2015.
Ny fahavitan’ny fandrafetana ny dinan’ny Boeny Miray Dia izay nolanian’ny ankolafin-kery samy hafa avy amin’ny distrikan’i Soalala, Mitsinjo, Mahajanga II ary Marovoay dia anisany dingana lehibe ho an’ny fandriampahalemana manoloana ny fihanakin’ny halatr’omby sy ny asan-dahalo aty amin’ny faritra.
Mitohy ny ezaka:
Nambaran’ny Lehiben’ny Faritra fa mbola ho tohizana hatrany ny ezaka RRI fampidiran-ketra isa-kaomina ary ny fanatanterahana ilay atrik’asa ho an’ireo mpitrandraka harena ankibon’ny tany antsoina hoe Lanja miakatra.
Anisany andrandrainy hitondra fanavaozana ara-tsosialy sy ara-toekarena ihany koa ny faharisihan’ireo mpanambola hananganana orin’asa eto Boeny. Anisan’izany ny orin’asa mpamokatra menaka sakafo voadio ao amin’ny distrikan’i Mahajanga II, ny fanokafana ny foibe famokarana angovo avy amin’ny herin’ny masoandro 10 méga-watts hamatsy ny eto Mahajanga sy ny manodidina.
Tany am-piandohan’ny fotoana dia nangataka iray minitra fahanginana ny Lehiben’ny faritra ho fanomezam-boninahitra ny Ben’ny tanànan’ny kaominina Belobaka izay vao nodimandry teo, amin’ny maha mpiara-miasa mavitrika azy fon’ny fahavelony.